Ngathi-uWalter Electrical Equipment Co, Ltd.
Ukwenziwa kobugcisa kunye noyilo lwenkqubo yokuvelisa: iWalter Eelectrical Equipment Co, Ltd.
UWalter njengokwenza iiseti zejenereyitha zedizili, sinamava emveliso atyebileyo. Umzi-mveliso kaWalter wawukhule ngo-2003, sikhethekileyo kwi-generator efayilishwe ngaphezulu kweminyaka eli-16. UWalter uliqabane le-OEM likaPerkins, iCummins, iDoosan, iMTU, iVolvo kunye nokunye, kunye namandla ombane ukusuka kwi-5kw-3000kw. Ngokuya kuyilo lweeseti ezahlukeneyo, kukho ezi ntlobo zilandelayo: uhlobo oluvulekileyo, uhlobo olungathethiyo (luxhotyiswe ngophahla olungathethiyo), uhlobo lwesikhongozeli, uhlobo lwekharavani.
Umzi-mveliso waseWalter ubekwe eYangzhou, kwiphondo laseJiangsu, China. Indawo yeFektri ingaphezulu kwe-2500 yemitha yesikwere kwaye ixhotyiswe ngezixhobo eziphambili kubandakanya umatshini wokusika we-laser, umatshini wokubetha we-CNC, umatshini wokugoba we-CNC njalo njalo. UWalter uye wathumela ngaphandle amagcisa kunye namaziko agqwesileyo ukuhambisa imveliso yeeseti zokuqala zejenreyitha.
Ukuqinisekisa umgangatho wempahla ephezulu, uWalter wazisa iNkqubo yeNkqubo yoLawulo lweSoftware kwaye wafumana iSatifikethi seMigangatho ye-ISO9001. Zonke iiseti zomvelisi zivunyiwe nge-CE. Ukuvavanywa kwemveliso okumanyanisiweyo okusemgangathweni, apho zonke iimveliso zilungelelanisa kwaye zivavanye ngaphambi kokushiya umzi-mveliso, ukuqinisekisa ukuba abasebenzisi bokugqibela baya kwaneliswa ziiseti zethu zomenzi wenkunkuma ngelixa ziqhutywa.
Ngenxa yeemveliso zethu ezilungileyo kunye neenkonzo, safumana ukuthembela ngakumbi nangakumbi kwabathengi. UWalter useke ubudlelwane obubanzi kunye neenkampani zangaphandle kwiifayile ezininzi, ezinjengeenkampani zonxibelelwano ezivela eNigeria, ePeru, eIndonesia. Besithumela umbane kwiAfrika, eMzantsi Afrika, eMzantsi Asia, kuMazantsi mpuma Asia.
Kwixesha elizayo, siya kuqhubeka nokunikezela ngeempahla ezikumgangatho ophezulu, iinkonzo ezilungileyo kubaxumi bethu. Ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ofanayo, ukubonelela ngenkonzo ye-pfofessional, ukubonelela ngokulula ngokulula nangokufanelekileyo, malunga nemigangatho emithathu yeyokujolisa kwethu ekuhambeni kwexesha. Nceda undikholelwe, ukukhetha uWalter kuya kuba lukhetho lwakho olunobulumko.